Fahatakarana Ny Olana Venezoeliàna Amin’ny Alàlan’ny Lalao An-dahatsary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Oktobra 2017 5:05 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Português, Türkçe, Ελληνικά, বাংলা, Français, عربي, Español
Pikantsarin'ny pejy mampiantrano ireo lalao ampiasàna ny #VzlaCrisisJam
An'aliny marobe tsy tambo nisaina ny olona nidina an'arabe nanohita ny olana nasionaly marolafy ao Venezoelà, fa ireo fihetsehampo mpanohitra ny governemanta koa dia nahita fomba hafa tsy mahazatra hamoahana izany.
Tamin'ny Jona sy Jolay tamin'ity taona ity, andianà mpandrafitra rindrankajy sy olona vitsivitsy liana amin'ny kolontsaina niomerika no nifamory mba hiaraka hanangana sy hanome endrika andianà lalao an-dahatsary afantoka amin'ny olana Venezoeliàna.Teraka araka izany ny #VzlaCrisisJam, fikaonandoha iray “game jam / fiketrehana lalao” hamoronana lalao anaty solosaina mampiseho taratra ny endrik'ilay olana.
Tamin'ny 2009 ny “game jam” voalohany tao Venezoela no natao tao Caracas renivohitra ary nanodidina ny 80 ireo lalao ety anaty aterineto voaforona tamin'ny alàlan'ny hetsika toy izany.
Nolazain'ireo mpikarakara ilay Fiketrehana Lalao manana lohahevitra mitodika amin'ny politika fa :
Raisina an-tanandroa daholo izay karazan-tsehatra rehetra misy, saingy mino aho fa mba hahazoana vokatra tsara kokoa dia tokony ho mora idirana [ ilay sehatra]: lalao fanao amin'ny solosaina (na izany Linux, Windows na Mac), na lalao ho an'ireo finday mampiasa html5. Tsy ratsy ny lalao amin'ny finday raha manana fahafahana mametraka azy aminà ‘tsena’ iray [ireo mpamorona].
Anivon'ireo asa famoronana vitan'ny #VzlaCrisisJam, izay afaka jerena eto, ny “Faces of the Guaire” (ny Endrik'i Guaire, renirano mikoriana mamakivaky an'i Caracas). Ny fehizoro dia ny andro nisian'ny hetsi-panoherana tamin'ny 19 Aprily izay nitranga tao amin'ny lalambe migodàna ao Francisco Fajardo, mifanila amin'ilay renirano. Nalaza be ny hoe voatery hitsambika tany anaty rano ireo mpanao hetsi-panoherana mba handositra ny famelezana tamin'ny entona mandatsa-dranomaso nanjo tamin'izay andro izay.
Lalao iray hafa noforona avy amin'ilay fiketrehana ny “Ny Toekarena entin'ny Arepa iray”, karazan-tsakafo iray mampiavaka ny Venezoeliàna, ka ezahan'ireo mpilalao ny hitantana toeram-pisakafoanana virtoaly iray, ary ilàna ny fiatrehana ny fiakarambidin'ireo akora (noho ny fidinan'ny sandambola indrindra indrindra) ary fahasarotan'ny fitadiavana azy ireny. Ny roa amin'ireo lalao, “Reality Revealed / Ny Zavamisy Abaribary” sy “Vzla2017″, lalao iray izay mamerina mamorona ireo hetsi-panoherana sy ny famoretana, ary farany, ny “Feria” mifantoka aminà olona iray, miaramila izay mila mitandro ny filaminana manoloana ireo andian'olona mitaky sakafo sy fanafody:
Lalao santatra izay, tsy maintsy itsinjarànao, amin'ny maha-nìmiaramila anao, ireo vokatra fototra ho an'ny vahoaka. Saingy misy tokoa zavatra sasantsasany izay tsy azonao zaraina. Kitihana amin'ny alàlan'ny totozy ilay miaramila ary sintonina miverina mba hanipy ilay vokatra. Ny potsitra atao amin'ny ilany havanana no mamadika ny vokatra ho atsipinao aorian'ilay iray. Potsirna ilay manadrify ny rambony (boribory) mba hanaovana famoretana.
Rehefa atambatra, nahavokatra drafitra 15 ilay fiketrehana, ka enina amin'izany no afaka lalaovina ety anaty aterinetoary sivy no afaka trohana sy lalaovina amin'ny Windows. Ny tanjona, ao anaty fomba maro samihafa izay mandrakariva tsy takatr'ireo ankolafy samihafa tafiditra amin'ilay fifandonana, dia ny hanomezana fomba fijery hafa ny atin'ny olana iray izay mandona lafy maro amin'ny vahoaka.
Araka ny lazain'ny iray iray amin'ireo mpampiroborobo ilay tetikasa :
Amin'izao fotoana izao izahay dia mifantoka amin'ny hoe ho hatraiza no tratran'ireo lalao sy ny fomba fiarahana miasa. Raha toa ireo fanehankevitra sy tamberina ka miabo avokoa amin'ny ankapobeny, dia ho afaka mamerina indray azy io izahay. Manasa ny olona aho hanandrana, na dia ho iray ihany aza amin'ireo lalao, ilay iray izay miantso indrindra indrindra ny fahatongavantsain'izy ireo, ary hamela fanehoankevitra ao amin'ilay pejy.
Tao amin'ny bilaogin'i Rafael Uzcátegui ity lahatsoratra ity no nivoaka voalohany ary naverin'ny Global Voices navoaka rehefa nahazoana alàlana tmainy.